တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ပြာပုံထဲက ရုန်းထနိုင်မည်လော …
Posted by မေဓာဝီ at 5:14 AM
thanks for sharing with the articles whatever you have, whatever your thoughts, do keep thinking and do keep writing your post,
Now i am still waiting for your new post for today.. i think you are busy or connection is no good. any way.. there is your friend who is longing for your post. Haveanice day..
2/10/2007 5:16 AM
အဲ့ဒီထဲမှာ သင်္ဘောသား စာရေးဆရာတယောက်ရေးတာ အကြိုက်ဆုံးပဲဗျ..
အတော်ကိုအရဲစွန့်ပြီး သီပေါမင်းနောက်ဆုံးခေါင်းချခဲ့တဲ့ မြို့ကိုအရောက်သွားပြီး သေချာလေ့လာရေးတာဗျ... အဲ့ဒီမြို့မှာ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက တဦးတည်းသာ သက်ရှိထင်သားရှိတော့တဲ့ သီပေါမင်းရဲ့မြေး ကုလားကပြားအဘွားအိုကြီးအိမ်ကိုပါ အရောက်သွားတွေ့ခဲ့ပုံတွေပါရေးတာ... မြေးတွေ..မြစ်တွေရဲ့ဘ၀နုံချာပုံကလည်း ဖတ်ရတာ သူတောင်းစားသာသာရယ်ပါ... တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပဲ.. အခု မမေဆောင်းပါးဖတ်ပြီး ခပ်နောက်နောက်အတွေးတခုရတယ်ဗျ...
ရှေးတုန်းက ဂီတစာဆိုတွေဟာ ဒီခေတ်မှာသာရှိရင် အပျံစား ကြော်ငြာဒါရိုက်တာတွေ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျ... သူတို့ရေးတဲ့သီချင်းတွေမှာ သူတို့နာမ်မည်တွေ ထည့်သွင်းစပ်ဆိုကြော်ငြာရတာ အမောပါကလားကွယ်....
2/10/2007 9:52 PM
မမေ.. စာအုပ်လေးအကြောင်းမျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ ။ အလွန်တန်ဖိုးရှိတာပဲ ။
2/11/2007 7:19 AM